Ihe Chineke dị ndụ ji ka chi mba dị iche iche (1-16)
A ga-ebibi Jeruselem, dọrọkwa ndị bi na ya n’agha (17, 18)
Jeremaya na-eru uju (19-22)
Ekpere Jeremaya onye amụma kpere (23-25)
Mmadụ enweghị ikike iduzi nzọụkwụ ya (23)
10 Ndị Izrel, nụrụnụ aka ná ntị Jehova na-adọ unu. 2 Jehova kwuru, sị: “Unu emekwala omenala mba dị iche iche.+ Unu atụla ihe àmà ndị si n’eluigwe ụjọMaka na mba dị iche iche na-atụ ha ụjọ.+ 3 N’ihi na omenala mba dị iche iche na-emegharị ndị mmadụ anya.* Omenkà na-aga gbutuo osisi nkịtị dị n’ọhịa,Jiri ya pịa arụsị.+ 4 Ọ na-eji ọlaọcha na ọlaedo chọọ ya mma,+Jirikwa hama na ntu kụgide ya n’ihe ka ọ ghara ịda.+ 5 Arụsị ndị ọ na-apị anaghị ekwu okwu otú ahụ ihe e ji achụ anụmanụ n’ubi kukumba na-anaghị ekwu okwu.+ A na-ebu ha ebu n’ihi na ha anaghị aga ije.+ Atụla ha ụjọ n’ihi na ha agaghị emeli mmadụ ihe ọ bụla. Ha enweghịkwa ike imere mmadụ ihe ọma ọ bụla.”+ 6 Jehova, o nweghị onye dị ka gị.+ Ị bụ onye ukwu. Aha gị na-ede ude, na-egosikwa na ị dị ike. 7 Eze mba niile,+ e nweghị onye na-ekwesịghị ịtụ egwu gị, maka na e kwesịrị ịna-atụ egwu gị. N’ihi na n’ime ndị niile ma ihe ná mba dị iche iche nakwa n’alaeze ha niile,E nweghị otu mkpụrụ onye dị ka gị.+ 8 Ha niile anaghị eche echiche. Ha bụkwa ndị nzuzu.+ Onye na-eche na osisi ga-akụziri ya ihe na-aghọgbu onwe ya.*+ 9 A na-esi Tashish+ ebute ọlaọcha, na-esikwa Yufaz ebute ọlaedo. Omenkà na onye na-eji ígwè akpụ ihe na-eji ha achọ ahụ́ arụsị ndị ahụ mma. Ndị mmadụ na-ejikwa eri na-acha anụnụ anụnụ na ajị anụ na-acha pọpụl* eme ákwà ha. Ọ bụ ndị nwere nkà na-arụ ha niile. 10 Ma, Jehova bụ Chineke n’eziokwu. Ọ bụ Chineke dị ndụ,+ bụrụkwa Eze ruo mgbe ebighị ebi.+ Ụwa ga-ama jijiji n’ihi iwe ya,+E nweghịkwa mba ga-adịgide ma o wesa ha iwe. 11 * Gwanụ ha, sị: “Chi niile ọ na-abụghị ha kere eluigwe na ụwaGa-ala n’iyi. Ha agaghịzi adị n’ụwa a nakwa n’okpuru eluigwe.”+ 12 Ọ bụ Chineke ji ike ya kee ụwa,Jiri amamihe ya mee ka elu ala sie ike,+Jirikwa amamihe* ya gbasaa eluigwe ka ákwà.+ 13 Olu ya na-emeKa mmiri dị n’eluigwe mee mkpatụ.+ Yanwa na-emekwa ka alụlụụ* si n’ebe niile ụwa sọtụrụ na-akwụgo elu.+ Ọ na-eme ka àmụ̀mà na-egbu mgbe mmiri na-ezo.* Ọ na-emekwa ka ifufe si n’ebe ọ na-adị pụta.+ 14 Onye ọ bụla na-akpa àgwà ka onye na-enweghị uche na onye na-amaghị ihe. Ihere ga-eme omenkà ọ bụla n’ihi arụsị ndị ọ kpụrụ,+N’ihi na arụsị ndị ahụ bụ ihe e ji eduhie mmadụ. Ha anaghịkwa eku ume.*+ 15 Ha na-emegharị mmadụ anya,* na-atọkwa ọchị.+ N’oge Chineke ga-elebara ha anya, ha ga-ala n’iyi. 16 Chineke* nke Jekọb adịghị ka arụsị ndị a,N’ihi na ọ bụ ya kere ihe niile. Izrel bụkwa mkpara ya.*+ Jehova nke ụsụụ ndị agha bụ aha ya.+ 17 Jeruselem* a nọchibidoro anọchibido,Kwakọta ngwongwo gị dị n’ala. 18 N’ihi na Jehova kwuru, sị: “N’oge a, m ga-achụpụ ndị bi n’ala a.+ M ga-eme ka ha taa ahụhụ.” 19 Ataala m ahụhụ n’ihi ọkpụkpụ m nke gbajiri agbaji.+ Ahụ́ e merụrụ m enweghị ngwọta. M kwukwara, sị: “N’eziokwu, ihe a bụ ọrịa na-arịa m. M ga na-edikwa ya. 20 E bibiela ụlọikwuu m. E gbubiekwala ụdọ ụlọikwuu m niile.+ Ụmụ m ahapụla m pụọ. Ha anọghịzi.+ E nweghịzi onye na-agbasa ụlọikwuu m. E nweghịkwa onye na-eweli ákwà ụlọikwuu m elu. 21 N’ihi na ndị na-azụ atụrụ na-akpa àgwà ka ndị na-enweghị uche.+ Ha achọghị ịma ihe Jehova chọrọ ka e mee.+ Ọ bụ ya mere ha ji eme ka ndị na-anaghị aghọta ihe. A chụsasịala anụmanụ ha niile.”+ 22 Geenụ ntị! E nwere ihe anyị nụrụ ugbu a. A na-anụ oké mkpọtụ n’ala dị n’ebe ugwu.+ Oké mkpọtụ a ga-eme ka obodo ndị dị na Juda tọgbọrọ nkịtị, ghọọ ọgba nkịta ọhịa.+ 23 Jehova, ama m nke ọma na ọ dịghị mmadụ n’aka ikpebi ụzọ o kwesịrị iso. Mmadụ enweghịkwa ikike iduzi nzọụkwụ ya mgbe ọ na-eje ije.+ 24 Jehova, gbazie m otú dị gị mma. Ejikwala iwe agbazi m,+ ka ị ghara ibibi m.+ 25 Wesa mba ndị na-amaghị gịNakwa ezinụlọ ndị na-anaghị akpọku aha gị ezigbo iwe.+ N’ihi na ha na-alụso Jekọb ọgụ.+ N’eziokwu, ha na-alụso ya ọgụ, na-achọkwa ibibi ya.+ Ha emeekwala ka ala ya tọgbọrọ chakoo.+
^ Ma ọ bụ “enweghị isi.”
^ Ma ọ bụ “na-eche ihe na-enweghị isi.”
^ Ọ bụ asụsụ Arameik ka e ji dee amaokwu a mgbe mbụ e dere ya.
^ Na Hibru, “Nwaanyị.”